गर्भावस्थामा सम्भोग कति उत्तम – MeroJilla.com
प्रधानमन्त्री कार्यालयको हेल्लो सरकार नामको मात्रै फोन समेत नउठने नागरिकको गुनासो
सचिव-सहसचिवलाई एक बर्ष नपुगी सरुवा गर्न नपाइने
नेपाल र चीनबीच विभिन्न १४ विषयका सम्झौतामा हस्ताक्षर
मेस्सीको जादु नचल्दा अर्जेन्टिनाको लज्जास्पद पराजय
कुश्मा ७ का महिलालाई अचार बनाउने तालिम
पर्वत :हातेमालो अभियानबाट ब्लड क्यान्सर पीडित गौतमलाई आर्थिक सहयोग
प्रदेश ४ मा कम्युनिष्टलाई दही तर कांग्रेसलाई पानी नि छैन !
कुश्माकाे गुनासाेः शिक्षा क्षेत्रमा कम बजेट छुट्याइयाे
नेकपाको पनि अव छायाँ सरकार
अब बिदेशमा बसेर समाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्न नपाइने
गर्भावस्थामा सम्भोग गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता प्रचलित छ । तर, यो सत्य होइन । यस्तो अवस्थामा शरीरमा थकाइ हुन सक्छ । जसले पार्टनरसँग नजिक हुन झन्झट पनि लाग्न सक्छ । तर, दोस्रो ट्राइमेस्टर अर्थात् तीनदेखि ६ महिनाको दौरानमा बान्ता हुन बन्द हुन्छ । त्यसपछि हल्का महसुस पनि हुन थाल्छ । त्यतिवेला तपाईंलाई सम्भोगको चाहना आउन सक्छ । डाक्टर शिल्पिता शानथप्पाले गर्भावस्थामा गर्ने सेक्स र त्यसको परिणामबारे बताएकी छिन् :
ल धेरै मानिसले भन्ने गर्छन् कि गर्भावस्थामा शारीरिक सम्पर्क राख्दा भ्रुणलाई समस्या पर्छ । तर, यस्तो सोच गलत हो । गर्भवती भएका वेला स्ट्रेच भएर भेजाइनाको आकार अलिकति बढ्ने गर्छ । जसका कारण गर्भाशयको बाहिरी भागमा म्युकस लेयर जम्मा हुन्छ । यसले गर्दा गर्भवती आमाले सम्भोग गर्दा पनि बच्चालाई भने युट्रसमा सुरक्षित राख्ने काम गर्छ ।
ल त्यस्तै, अर्को मान्यता छ कि यस्तो अवस्थामा शारीरिक सम्पर्क राख्दा आमामा लेबर पेन बढ्न थाल्छ । तर, यो पनि पूर्ण सत्य होइन । यस्तो वेला सिमनमा केही मात्रामा प्रोस्टाग्लिडिन जम्मा हुन्छ ।
० गर्भावस्थामा शारीरिक सम्पर्क राख्दा पेल्भक मसल्स बलियो बन्छ ।
० यस्तो अवस्थामा गरेको शारीरिक सम्पर्कले रक्तसञ्चारलाई पनि सन्तुलित गर्ने काम गर्छ ।
० आरामदायी निद्रा लाग्छ ।
० यसले दुईबीचको प्रेम र आत्मीयतालाई थप बढोत्तरी गर्ने काम गर्छ ।
जसले गर्दा गर्भवतीलाई दुखाइचाहिँ हुन सक्छ । बच्चा जन्माउने समय पनि सिन्थेटिक प्रोस्टाग्लिडिन सञ्चित नै हुन्छ जसले बच्चालाई बाहिर निकाल्न दबाब सिर्जना गर्छ । तर, सम्भोगकै कारण लबर पेन हुनेचाहिँ सत्य होइन ।
ल शारीरिक सम्पर्कपछि गर्भवती आमालाई ब्लिडिङ हुन्छ भन्ने पनि आममान्यता छ । कतिपयले यस्तो वेला सम्भोग गर्दा बच्चा नै खेर जानेसम्म बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा गर्भाशय सेन्सिटिभ हुने भएकाले शारीरिक सम्पर्कका वेला थोरै ब्लडचाहिँ देखिन सक्छ ।
जुन सामान्य हो । बढी नै ब्लिडिङ भएमा चिकित्सककहाँ जानुपर्ने हुन्छ । तर, शारीरिक सम्पर्ककै कारण यसरी ब्लिडिङ हुनेचाहिँ होइन ।
ल यस्तो अवस्थामा शारीरिक सम्पर्क राख्दा भेजाइन इन्फेक्सन हुन्छ भनेर धेरै महिला त्रसित हुने गर्छन् । यदि तपाईंको पार्टनरमा यौनरोग (सेक्सुअल टान्समिटेड डिजिज) छैन भने यसबारे कुनै चिन्ता लिनुपर्दैन । तर, भेजाइनालाई सफा राख्न भने जरुरी छ ।
महिलाको कुन अंगमा छुदा सेक्स गर्न आतुर हुन्छन् ? लिनुहोस् टिप्स ?	Wednesday, May 9th, 2018
महिनाबारीमा सेक्स कति उत्तम, एक्टिभ समय, प्यासिभ समय	Friday, May 4th, 2018
महिलाले कसरी हस्तमैथुन गर्न सक्छन् ?	Tuesday, May 1st, 2018
प्रधानमन्त्री कार्यालयको हेल्लो सरकार नामको मात्रै फोन समेत नउठने नागरिकको गुनासो June 22, 2018
सचिव-सहसचिवलाई एक बर्ष नपुगी सरुवा गर्न नपाइने June 22, 2018
नेपाल र चीनबीच विभिन्न १४ विषयका सम्झौतामा हस्ताक्षर June 22, 2018
मेस्सीको जादु नचल्दा अर्जेन्टिनाको लज्जास्पद पराजय June 22, 2018
कुश्मा ७ का महिलालाई अचार बनाउने तालिम June 22, 2018
पर्वत :हातेमालो अभियानबाट ब्लड क्यान्सर पीडित गौतमलाई आर्थिक सहयोग June 22, 2018
प्रदेश ४ मा कम्युनिष्टलाई दही तर कांग्रेसलाई पानी नि छैन ! June 21, 2018
कुश्माकाे गुनासाेः शिक्षा क्षेत्रमा कम बजेट छुट्याइयाे June 21, 2018
नेकपाको पनि अव छायाँ सरकार June 21, 2018
अब बिदेशमा बसेर समाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्न नपाइने June 21, 2018
‘चिनियाँ रेल अब सपनाको विषय मात्र रहेन’ June 21, 2018
आगामी २२ वर्षमा मुलुकमा बिजुलीको माग १८ हजार १३७ मेगावाट पुग्ने June 21, 2018
अमेरिकामा देह व्यापार भण्डाफोर June 21, 2018
सिमेन्ट उद्योगमा चिनियाँ लगानी बढ्यो, हुवासिनले १४ अर्ब भित्र्याउँदै June 21, 2018
धौलागिरिको फेदमा होटल व्यवसाय June 21, 2018